Banyere Anyị - Daxin Machinery Co., Ltd.
Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd.bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na -emepụta akụrụngwa ọrụ ikuku. Ụlọ ọrụ ahụ na -arụ ọrụ n'ime imewe, mmepe, imepụta na ire nke ngwa ọrụ ikuku. Daxin Machinery na-eburu ibu ọrụ nke inye ọtụtụ ndị ọrụ akụrụngwa dị elu, ọnụ ala dị elu, na-emezi ngwaahịa dị ugbu a, na-ebupute usoro ngwaahịa ọhụrụ oge niile iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa dị iche iche. Ngwaahịa ya nwere njiri mara akụrụngwa ọhụrụ, na -ewuli elu ma na -arụkwa ọrụ nke ọma. A na-eji ngwaahịa eme ihe na nyocha dị elu, nrụnye na ndozi ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ, ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ, ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ mmiri, ike eletrik na ụlọ ọrụ ndị ọzọ; njikwa ibu, njem, na ịkwakọba n'ụlọ nkwakọba ihe, ụgbọ mmiri, na ahịrị mmepụta; ámá egwuregwu, ụlọ nzukọ na ụlọ elu ndị ọzọ Ebe ndị a na-amaghị ama, ịchọ mma, ọrụ ndozi na nhicha, wdg, nwere ike melite arụmọrụ ọrụ ya nke ọma.
The ụlọ ọrụ nwere nnukwu-ọnụ ọgụgụ ọnwụ, ekwe, ịgbado ọkụ, spraying na ndị ọzọ ọkachamara akụrụngwa, nakwa dị ka otu ìgwè nke ọkachamara oru injinia na ọkachamara mgbe-sales ọrụ pesonel. Ụlọ ọrụ ahụ nwere nzukọ dị mma, teknụzụ siri ike na ike bara uru nke ndị ọrụ, nzukọ nrụpụta dị mma, yana nkwado ihe ndekọ ntụkwasị obi. Ọ na -ejikọ mmepụta, ahịa na ọrụ ịgbazinye ego iji nye ndị ahịa dị iche iche akụrụngwa na ọrụ kacha dabara adaba.
Machinery Qingdao na-agbaso echiche nke azụmaahịa nke "ndị mmadụ, ọrụ ahaziri iche, ịsụ ụzọ na ihe ọhụrụ, na ogbugbu dị mma", na-achụ mmụọ nke "ihe ọhụrụ, ịchọ eziokwu, ịkwụwa aka ọtọ, na ịdị mma", na-arụsi ọrụ ike na-arụ ọrụ otu yana atụmatụ azụmaahịa mba ụwa, ma na -arụ ọrụ maka akụrụngwa ikuku Mmepe teknụzụ nke ụlọ ọrụ arụpụtala ihe na -amị mkpụrụ. Ịdabere na uru teknụzụ, uru ihe ọhụrụ na uru ika, ụlọ ọrụ ahụ na-arụpụta ihe ọhụrụ na ike zuru oke emeela ngwa ngwa, na-atụ anya ịbụ onye klaasị mbụ na onye nrụpụta ama ama nke ngwa ọrụ ikuku.
Isi Ngwaahịa: mkpisi mkpali, mbuli ụgbọ ala, ebuli ibu, aluminom ọrụ ikuku ikuku, ebuli oche nkwagharị, mbuli elu, ụgbọ elu ọrụ ụgbọ elu dị elu, onye na -atụ ihe, onye na -akwa ihe, ebe mgbago ụgbọ mmiri wdg.